Iker Casillas Oo Fariin Qurux Badan U Diray Gigi Buffon Ka Dib Markii Uu Telefishinka Ka Daawaday Goolhayaha Italy Oo Ooyaya - Laacib.net
Iker Casillas Oo Fariin Qurux Badan U Diray Gigi Buffon Ka Dib Markii Uu Telefishinka Ka Daawaday Goolhayaha Italy Oo Ooyaya
by Saed Balaleti | Tuesday, Nov 14, 2017
Ciyaarta ugu danbeysa ee Gianluigi Buffon waxa ay aheyd inay noqoto isagoo ciyaaraya finalka Koobka Adduunka ee Russia iyadoo goolhayaha halyeeyga ah uu kor u qaadayo koobka ka hor inta uusan ciyaaraha ka fariisanin.
Laakiin taasi ma dhici doonto ka dib markii ay Italy ku guuldareysatay inay xitaa u soo baxdo Koobka Adduunka ka dib markii ay guuldarro 1-0 ka soo gaartay Sweden labadii lug ee ay la ciyaareen ee kala baxa ahaa.
Waxa ay la micno tahay in Koobka Adduunka uu noqon doono mid ay ka maqan tahay Italy iyo weliba Buffon.
39 jirkaan oo hore u soo jeediyay in xilli ciyaareedkan uu noqon doono midkiisii ugu danbeysay ayaa taageerayaal badan ay iska sii ogaayeen in haddii Italy ay ka soo talaabsan weyso Sweden in Buffon uu ku dhawaaqayo inuu ka fariistay xulka qaranka.
Buffon ayaana oohin iscelin wayay markii uu ku dhawaaqayay ciyaarta ka dib in kulankaan uu ahaa kiisii ugu danbeysay ee xulka qaranka, waxaana xanuun badan ku heysay in Italy ay ka maqnaato Koobka Adduunka markii ugu horeysay tan iyo 1958.
Taageerayaal badan oo kubada cagta ah ayaana ka murugooday inay arkaan Buffon oo ilmeynaya, si la mid ah goolhayaha kale ee halyeeyga ah Iker Casillas kaasoo fariin qurux badan u diray dhigiisa Talyaaniga.
Goolhayaha reer Spain ayaa fariin taageero ah u diray Buffon taasoo u tarjumeysa: “Ma jecli inaan kugu arko sidaan. Waxaan ku arkaa sida ay dad badan weli kuu arkaan: halyeey. Sharaf ayay ii tahay inaan ku garanayo, sharaf ayay ii tahay inaan dhowr jeer kaa horimid. Waxaad weli inooga farxin kartaa kubad saaxiibtinimo!”
Weeraryahanka Man United Romelu Lukaku Oo Shaaca Ka Qaaday Kooxda Ay Riyadiisa Tahay Inuu U Ciyaaro Kadib Waqtigiisa Old Trafford.84 Total Shares
Ernesto Valverde Oo Doonaya Inuu Barbareeyo Rikoorka Guuldaro La’aanta Ugu Dheer Kooxda Ee La Liga Kulanka Maanta Ee Eibar – Yaa Horay U Dhigay Rikoorkaas?66 Total Shares
DEG-DEG: Paul Pogba Oo Seegi Doona Kulanka Huddersfield Ee Tartanka FA Cup-ka & Sababta Oo La Ogaaday.55 Total Shares